तपाईं जीवनमा सफलता तिर अगाडी बढिरहनुभएको छ कि छैन ? यस्ता छन् थाहा पाउने तरिका - Safal Stories
Home Safal's Columns Safal Tips तपाईं जीवनमा सफलता तिर अगाडी बढिरहनुभएको छ कि छैन ? यस्ता छन्...
तपाईं जीवनमा सफलता तिर अगाडी बढिरहनुभएको छ कि छैन ? यस्ता छन् थाहा पाउने तरिका
सफल व्यक्तिहरुका कथा पढिरहंदा कहिलेकाहीं हामीलाई आफूले केही उपलब्धि हासिल गरेको छैन भनेर खिन्न लाग्छ। कहिलेकाहीं सफलता आफू देखि धेरै टाढा रहेको जस्तो लाग्छ र आफूले आफैलाई असफल व्यक्ति ठानिरहेको हुन्छौं । हाम्रो समाजमा सफलतालाई पैसासंग तुलना गर्ने गरिन्छ । जुन व्यक्तिको धेरै कमाइ हुन्छ, उसले नै सफल व्यक्तिको रुपमा मान प्रतिष्ठा कमाइरहेको हुन्छ । यस कुराले पनि हामीलाई आफूले जीवनमा प्रगति गर्न सकिरहेको छैन भन्ने लाग्छ ।
आफ्नो हिजोलाई सम्झनुहोस् र त्यो हिजोलाई आजसंग तुलना गरेर हेर्नुहोस् । तपाईं हिजो कुन स्थानमा हुनुहुन्थ्यो र आज कुन स्थानमा हुनुहुन्छ ? हिजो तपाईंसंग कति अनुभव थिए र आज तपाईंसंग कति अनुभव छन् ? हिजो भन्दा आज तपाईं एक स्थान भएपनि अगाडी हुनुहुन्छ, हिजो भन्दा आज तपाईंसंग असफलताकै भएपनि अनुभवहरु बढेका छन् भने, निरास नहुनुहोस् । तपाईं साँच्चै नै केही गर्न खोज्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ र तपाईं सफल हुनुहुनेछ ।
पैसा सफलताको आधार होइन । तपाईंसंग आत्मविश्वास, केही गर्न खोज्ने इच्छाशक्ति, कडा मेहनत गर्ने बानी छ र तपाईंले यस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ, जुन कामले तपाईं मात्र होइन, तपाईंको वरिपरिका व्यक्तिलाई पनि फाइदा पुग्छ, समाजलाई फाइदा पुग्छ भने तपाईं सफलताको बाटोमा हिंडीरहनुभएको छ । यसले तपाईंलाई आत्मसन्तुष्टि दिनेछ, तपाईंले आफैले आफ्नो परिचय बनाउनुहुनेछ र त्यहींबाट जीवनयापनको लागि आर्थिक लाभ पनि लिन सक्नुहुनेछ । यदि पैसाको पछि मात्र लाग्नुभयो भने त्यो सफलता क्षणिक हुनेछ ।
हरेक व्यक्तिलाई जीवनमा चोट पर्छ । तपाईंले आफ्ना चोटहरुलाई कसरि लिनुभएको छ ? यदि तपाईं हिजो पाएका चोटहरुलाई आज आफ्नो आत्मविश्वास बनाउनु भएको छ, त्यो चोटबाट केही सिकेर अगाडी बढिरहनुभएको छ, ती चोटहरुले अहिलेको आफ्नो वर्तमानमा असर पर्न दिइरहनुभएको छैन, पश्चातापमा बाँचिरहनु भएको छैन भने, विश्वास गर्नुहोस्, तपाईं सफल हुनुहुनेछ ।
सफल हुने व्यक्तिमा केही नयाँ सिक्ने चाह हुन्छ । यदि तपाईंले कुनै काम सिकेर त्यसमा पोख्त भएपछी त्यहि कामलाई मात्र निरन्तरता दिन सक्नुहुन्न र त्यो काममा केही नयाँपन आओस भन्ने चाहना राखिरहनुभएको छ भने तपाईंमा सफल हुने क्षमता छ ।
हरेक व्यक्तिको विगत हुन्छ र त्यो विगतसंग जोडिएका व्यक्तिहरु पनि हुन्छन् । सफल हुने व्यक्तिले आफूलाई चोट पुर्याएका, धोका दिएका ती व्यक्तिहरुलाई माफी दिन्छन्, उनीहरुले ती व्यक्तिलाई आफ्ना शत्रुको रुपमा चिनाउँदैन, तर उसले ती व्यक्तिहरुले दिएको चोट र धोकालाई कहिल्यै पनि बिर्सिदैन, उसले उनीहरुको अगाडी आफ्नो पहिचान बनाउने अठोट लिएर अगाडी बढिरहेको हुन्छ । ती व्यक्तिहरुलाई भेट्दा ऊ मुस्कुराउँछ र त्यो शक्तिले उसमा अगाडी बढ्ने ऊर्जा थपिदिन्छ ।
Previousआफूले दु:ख लुकाएर अरुलाई हाँस्न सिकाउने सम्पुर्ण बुवामा सम्मान : दुर्गा खनाल
Nextवैवाहिक जीवन सफल बनाउनको लागि ध्यान दिनुपर्ने साधारण कुरा